भूकम्पपछि कति भयो पुनः निर्माण ? यस्तो छ तथ्याङ्क « रिपोर्टर्स नेपाल
भूकम्पपछि कति भयो पुनः निर्माण ? यस्तो छ तथ्याङ्क
मंसिर १४, काठमाण्डौ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ५ बर्षको अवधिमा ८० प्रतिशत निजी आवासहरु निर्माण भएको जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बिनासकारी भूकम्पले भत्किएका करिव ८ लाख घर मध्ये ८० प्रतिशत निजी आवासहरु निर्माण भएको जानकारी दिए ।
उनले जटिल भौगोलिक अवस्थाका बाबजुत पनि सन्तोषजनक रुपमा निजी आवास निर्माण गर्न सफल भएको बताए । ज्ञवालीले भूकम्पले भत्किएका ८ हजार बिद्यालयमध्ये करिव ८० प्रतिशत निर्माण भइसकेको र बाँकी निर्माणका क्रममा रहेको जानकारी दिए । त्यस्तै ५ बर्षको अवधिमा स्वास्थ्य संस्थाहरु ६० प्रतिशत र सम्पदाहरुको पुननिर्माणको काम ५० प्रतिशत भन्दा बढि सम्पन्न भएको छ । ज्ञवालीले यसअवधिमा करिव ८ सय किलोमिटर सडक निर्माण भएको बताए ।
प्राधिकरणले चूनौतिपूर्ण अवस्था पार गर्दै बिभिन्न क्षेत्रको पुर्ननिर्माणलाई अहिलको अवस्थामा ल्याएको दावी गरेको छ । प्राधिकरणले २०७८ साल बैशाख १२ गते नेपालको पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।